တိုက်တန်းနစ်သဘောင်္ကြီး နစ်မြုပ်ပြီး နောက်ပိုင်း သင့်ကို အံ့သြတကြီး ဖြစ်စေမယ့် ဓါတ်ပုံ (၁၀) ပုံ - Myanmar News Plus
တိုက်တန်းနစ်သဘောင်္ကြီး နစ်မြုပ်ပြီး နောက်ပိုင်း သင့်ကို အံ့သြတကြီး ဖြစ်စေမယ့် ဓါတ်ပုံ (၁၀) ပုံ
February 20, 2018 By Myanmar Pyi Thar in ထူးဆန်းထွေလာ, နိုင်ငံတကာ Tags: တိုက်တန်းနစ်
လွတ်မြောက်လာခဲ့တဲ့ သဘောင်္သားတွေထဲက တစ်ဦးကို သဘောင်္နစ်မြုပ်ခဲ့တဲ့ ဖြစ်စဉ်အကြောင်း မေးမြန်းနေစဉ်
အစတုန်းကတော့ လွတ်မြောက်လာတဲ့ ဒီကလေးနှစ်ဦးကို နာမည်ဘယ်သူတွေမှန်း မသိကြပါဘူး ၊ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ သူတို့ရဲ. ဖခင်ဟာ သဘောင်္စီးစဉ်က သူတို့ရဲ. ချစ်စနိုးနာမည်နဲ့သာ မှတ်ပုံတင်ခဲ့လို့ပါ ။ နောက်ပိုင်းမှာတော့ သူတို့ရဲ. နာမည်ဟာ Michael နဲ့ Edmond Navratil ရယ်လို့ သိခဲ့ရပြီး တစ်ယောက်က အသက်လေးနှစ် နဲ့ နောက်တစ်ယောက်ကတော့ အသက်နှစ်နှစ်ပါ
ဒါကတော့ Michael နဲ့ Edmond Navratil တို့ရဲ. နောက်ထပ် ဓါတ်ပုံတစ်ပုံပါ ၊ ဒီပုံမှာတော့ မိခင်နဲ့ အတူတွေ့ရမှာ ဖြစ်ပြီး ၊ ကလေးနှစ်ယောက်ရဲ. ဖခင်ကတော့ သဘောင်္နစ်မြုပ်ရာမှာ ကွယ်လွန်ခဲ့ပါတယ်။
ယူနိုက်တက်ကင်းဒန်းက South Hampton မြို.ကို ပြန်ရောက်လာတဲ့ သဘောင်္ကြီးက မသေပဲ လွတ်မြောက်လာတဲ့ သဘောင်္သားတွေနဲ့ မိသားစုတို့ရဲ. တွေ့ဆုံခန်း
ဒီအမျိုးသားဟာ ရေခဲတောင်ကြီးကို ပထမဆုံးတွေ့ခဲ့သူတွေထဲက တစ်ဦးဖြစ်ပြီး ၊ သူဟာ အသက်ရှင်စိတ်ပြင်းပြပြီး လွတ်မြောက်ခဲ့ကာ ကမ္ဘာစစ်နှစ်ကြိမ်ဖြစ်ခြင်း ကနေလည်း ရှင်သန်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း နောက်ပိုင်းမှာ စိတ်ဓါတ်ကျပြီး ၁၉၆၅ ခုနှစ်မှာ သတ်သေသွားခဲ့ပါတယ်။
ဒီပုံကတော့ တိုင်တန်းနစ်သဘောင်္ကြီးကနေ လွတ်မြောက်လာသူတွေ စီးလာတဲ့ လှေငယ်လေးတွေပါ
7. Romance Among the Survivors
ဒီကလေးငယ်ဟာ သူမရဲ.မိခင်နဲ့ ဖခင်တို့ရဲ. ပျားရည်စမ်းခရီးမှာ ကိုယ်ဝန်ရှိစေခဲ့ပြီး ၊ သဘောင်္နစ်မြုပ်ရာကနေ လွတ်မြောက်ခဲ့ပါတယ်။ ဖခင်ကတော့ သဘောင်္နစ်မြုပ်ရာမှာ ပါသွားခဲ့ပေမယ့် ၊ ကလေးမိခင်ကတော့ ကလေးနဲ့အတူ လွတ်မြောက်ခဲ့ပြီး ၊ ဘဝတူ သဘောင်္နစ်မြုပ်ရာကနေ လွတ်မြောက်လာသူတစ်ဦးနဲ့ လက်ထပ်ခဲ့ပါတယ်။
8. Ordinary People Became Famous
တိုင်တန်းနစ်သဘောင်္ကြီး နစ်မြုပ်မှုသတင်းဟာ အဲ့ဒီအချိန်တုန်းက တစ်ကမ္ဘာလုံးရဲ. စိတ်ဝင်စားခြင်းကို ခံခဲ့ကြရပါတယ် ၊ ဒီပုံထဲမှာတော့ သဘောင်္နစ်မြုပ်စဉ်က လွတ်မြောက်လာသူတစ်ဦးက အမျိုးသမီးတစ်ဦးကို အမှတ်တရ လက်မှတ်ရေးထိုးနေတာပါ။
9. Sitting Aboard the Carpathia
လွတ်မြောက်လာသူတွေကို အခြားသော သဘောင်္တစ်စီးဖြစ်တဲ့ Carpathia ပေါ်မှာ တွေ့ရတဲ့ ပုံပါ
10. Families Gathered Waiting For Carpathia’s Arrival
ဒါကတော့ တိုင်တန်းနစ် သဘောင်္နစ်မြုပ်ရာကနေ ကယ်တင်လာသူတွေကို တင်ဆောင်လာတဲ့ Carpathia သဘောင်္ ဆိပ်ကမ်း ဝင်လာချိန်ကို စောင့်ကြိုနေသူတွေပါ။
တိုကျတနျးနဈသဘောင်္ကွီး နဈမွုပျပွီး နောကျပိုငျး သငျ့ကို အံ့သွတကွီး ဖွဈစမေယျ့ ဓါတျပုံ (၁၀) ပုံ
The Investigationလှတျမွောကျလာခဲ့တဲ့ သဘောင်္သားတှထေဲက တဈဦးကို သဘောင်္နဈမွုပျခဲ့တဲ့ ဖွဈစဉျအကွောငျး မေးမွနျးနစေဉျ
Women And Children Firstအစတုနျးကတော့ လှတျမွောကျလာတဲ့ ဒီကလေးနှဈဦးကို နာမညျဘယျသူတှမှေနျး မသိကွပါဘူး ၊ ဘာလို့လညျးဆိုတော့ သူတို့ရဲ. ဖခငျဟာ သဘောင်္စီးစဉျက သူတို့ရဲ. ခဈြစနိုးနာမညျနဲ့သာ မှတျပုံတငျခဲ့လို့ပါ ။ နောကျပိုငျးမှာတော့ သူတို့ရဲ. နာမညျဟာ Michael နဲ့ Edmond Navratil ရယျလို့ သိခဲ့ရပွီး တဈယောကျက အသကျလေးနှဈ နဲ့ နောကျတဈယောကျကတော့ အသကျနှဈနှဈပါ
Home Sweet Homeဒါကတော့ Michael နဲ့ Edmond Navratil တို့ရဲ. နောကျထပျ ဓါတျပုံတဈပုံပါ ၊ ဒီပုံမှာတော့ မိခငျနဲ့ အတူတှရေ့မှာ ဖွဈပွီး ၊ ကလေးနှဈယောကျရဲ. ဖခငျကတော့ သဘောင်္နဈမွုပျရာမှာ ကှယျလှနျခဲ့ပါတယျ။
Reunited And It Feels So Goodယူနိုကျတကျကငျးဒနျးက South Hampton မွို.ကို ပွနျရောကျလာတဲ့ သဘောင်္ကွီးက မသပေဲ လှတျမွောကျလာတဲ့ သဘောင်္သားတှနေဲ့ မိသားစုတို့ရဲ. တှဆေုံ့ခနျး
Lookout!ဒီအမြိုးသားဟာ ရခေဲတောငျကွီးကို ပထမဆုံးတှခေဲ့သူတှထေဲက တဈဦးဖွဈပွီး ၊ သူဟာ အသကျရှငျစိတျပွငျးပွပွီး လှတျမွောကျခဲ့ကာ ကမ်ဘာစဈနှဈကွိမျဖွဈခွငျး ကနလေညျး ရှငျသနျနိုငျခဲ့ပါတယျ။ ဒါပမေယျ့လညျး နောကျပိုငျးမှာ စိတျဓါတျကပြွီး ၁၉၆၅ ခုနှဈမှာ သတျသသှေားခဲ့ပါတယျ။
Savedဒီပုံကတော့ တိုငျတနျးနဈသဘောင်္ကွီးကနေ လှတျမွောကျလာသူတှေ စီးလာတဲ့ လှငေယျလေးတှပေါ
Romance Among the Survivorsဒီကလေးငယျဟာ သူမရဲ.မိခငျနဲ့ ဖခငျတို့ရဲ. ပြားရညျစမျးခရီးမှာ ကိုယျဝနျရှိစခေဲ့ပွီး ၊ သဘောင်္နဈမွုပျရာကနေ လှတျမွောကျခဲ့ပါတယျ။ ဖခငျကတော့ သဘောင်္နဈမွုပျရာမှာ ပါသှားခဲ့ပမေယျ့ ၊ ကလေးမိခငျကတော့ ကလေးနဲ့အတူ လှတျမွောကျခဲ့ပွီး ၊ ဘဝတူ သဘောင်္နဈမွုပျရာကနေ လှတျမွောကျလာသူတဈဦးနဲ့ လကျထပျခဲ့ပါတယျ။
Ordinary People Became Famousတိုငျတနျးနဈသဘောင်္ကွီး နဈမွုပျမှုသတငျးဟာ အဲ့ဒီအခြိနျတုနျးက တဈကမ်ဘာလုံးရဲ. စိတျဝငျစားခွငျးကို ခံခဲ့ကွရပါတယျ ၊ ဒီပုံထဲမှာတော့ သဘောင်္နဈမွုပျစဉျက လှတျမွောကျလာသူတဈဦးက အမြိုးသမီးတဈဦးကို အမှတျတရ လကျမှတျရေးထိုးနတောပါ။
Sitting Aboard the Carpathiaလှတျမွောကျလာသူတှကေို အခွားသော သဘောင်္တဈစီးဖွဈတဲ့ Carpathia ပျေါမှာ တှရေ့တဲ့ ပုံပါ
Families Gathered Waiting For Carpathia’s Arrivalဒါကတော့ တိုငျတနျးနဈ သဘောင်္နဈမွုပျရာကနေ ကယျတငျလာသူတှကေို တငျဆောငျလာတဲ့ Carpathia သဘောင်္ ဆိပျကမျး ဝငျလာခြိနျကို စောငျ့ကွိုနသေူတှပေါ။